Booliska oo 11 qof usoo qabtay kufsigii iyo dilkii Xamdi Maxamed Faarax - Caasimada Online
Home Warar Booliska oo 11 qof usoo qabtay kufsigii iyo dilkii Xamdi Maxamed Faarax
Booliska oo 11 qof usoo qabtay kufsigii iyo dilkii Xamdi Maxamed Faarax
Muqdisho (Caasimada Online) – Booliska Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inay qabteen 11 qof oo lagu tuhmayo kufsigii iyo dilkii magaalada Muqdisho loogu gaystay Xamdi Maxamed Faarax.
Qoraal ay soo saareen booliska ayey ku yiraahdeen “11-Sep-2020, abaare 01:30pm ayaa warbixin la soo gaarsiiyay Saldhiga Boliiska Degmada Waaberi, kaas oo ah in la helay meydka marxuumad taala dhanka hoose ee hotel lagu magacaabo Marwo ee ku yaala Waaxda Maajo ee Dagmada Waabari.”
“Meydka marxuumada ayaa la geeyay Isbitaal Daarul-shifa kadibna waxaa loo wareejiyay Xarunta C.I.D halkaas oo looga sii wareejiyay Isbitaalka Madiina si loo mariyo nidaamka baarista falka.”
Booliska ayaa sidoo kale sheegay in Taariikh 12ka September 2020 labo la tuhunsaneyaal ay maxakamad awood u leh ka sii deysay xabsiga Xarunta C.I.D. kadib markii maxkamada ku sifeeyeen in ay san wax xiriir ah kiiska la laheyn balse waqti kastoo loo baando la hell karo.
“Waxaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan eheladda marxuumad Xamdi Maxamed Faarax u cadeyneynaa in baarista kiiskaa uu marayo heer wanaagsan. Sidaasi si lamida ah, waxaan ummadda soomaaliyeed ka codsaneynaa in ay gacansiiyaan baarista kiisakan,” ayaa lagu yiri qoraalka booliska.
Hoos ka aqriso qoraalka booliska ay soo saareen